Ifarihy F./ Fisotrondronono – FJKM
Ifarihy F./ Fisotrondronono
Jobily fisotrondronono Mpampianatra
Tontosa soa aman-tsara ny fotoam-pivavahana fiderana an’Andriamanitra, notanterahina tao amin’ny FJKM Ifarihy Famonjena, izay misy ny Mpitandrina Atoa RAKOTOARISONA Joseph, tamin’ny Alakamisy 26 Septambra 2019, nohon’ny faha-23 taona niasan-dRtoa RALINORO LALAHARISOA Voahangy teo amin’ny sehatry ny fanabeazana, tao amin’ny Sekoly FJKM Ifarihy Famonjena sy ny fitrotroana am-bavaka azy amin’izao fandehanany misotro ronono izao.
Tonga nanotrona azy ny ankohonany sy ireo mpianatra nobeaziny ary ireo Mpanabe niara-niasa taminy sy ny mpino kristiana Ifarihy, niampy ireo solontena avy tany amin’ny Sekoly FJKM isam-pitandremana manana izany. Tsy diso anjara, fa tonga ihany koa, nanotrona ny Foibe FJKM tamin’ny alalan’ny Mpiandraikitra Foibe roa, ny Birao SPAA11 niaraka tamin’ny solontenan’ny Fiangonana isam-pitandremana, ny solontenan’ny Ministeran’ny Fanabeazana tamin’ny alalan’ny CISCO, niampy ireo olo-manan-kaja maro sivily sy miaramila niampy ireo namana sy tapaka nasaina.
Natomboka tamin’ny fotoam-pivavahana ny fotoana ka nitarika ny Filoha Mpanampy SPAA11, RASOLOFOMANDIMBY Mamisoa Olivier, Mpitandrina. Nitondra ny hafatr’Andriamanitra ny Sekretera Jeneraly FJKM, RADIMISAON ANDRIAMASINJARA Jonah, Mpitandrina, nalainy tao amin’ny Isaia 41:10d , izay teny faneva rahateo.
Tamin’ny fotoanan’ny asa vavolombelona dia nisy ny fandraisam-pitenenena nifandimbiasana sy fanolorana fankasitrahana tamin’ny fomba hita maso sy azo tsapain-tanana, ho an-dRtoa RALINORO LALAHARISOA Voahangy, nohon’ny fikelezany aina, tamin’ny lafiny fanabeazana, teo anivon’ny Sekoly FJKM Ifarihy Famonjena nandritry ny 23 taona ka andehanany misotro ronono ankehitriny. Fiaraha-nisakafo sy fiaraha-naka sary ary fanapahana mofomamy sy fizarana izany ho fiombonan’ainan’ny rehetra, no namaranana ilay fotoana niavaka, ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany ;
Hafatry ny Zaikabe -VII Sekoly FJKM